Office and Retail - Myanmar Builders Guide
Friday, 24 January 2020 10:34
ရတနာပုံဈေး မွညေီထပျဆိုငျခနျးမြား ဇနျနဝါရီ ၂၅ ရကျပွနျလညျဖှငျ့လှဈမညျ
ရတနာပုံဈေး မီးလောငျကြှမျးမှုတှငျ မပါဝငျခဲ့သညျ့ မွညေီထပျဆိုငျခနျးမြား၊ မွအေောကျသားငါးရောငျးခသြော ဆိုငျခနျးမြားနှငျ့ ဘေးကပျလကျြရှိ ဒိုငျးမှနျးပလာဇာ၊ Ocean Supercenter တို့ကို ဇနျနဝါရီ ၂၅ ရကျတှငျ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈမညျ ဖွဈသညျ။
Thursday, 16 January 2020 10:12
နယျမွို့လေးမှာ လကေောငျးလသေနျ့ရှုရှိုကျရငျး ဘဝကို အေးဆေးစှာဖွတျသနျးခငျြသူမြားအတှကျ အလှနျသကျသာတဲ့ဈေးနှုနျးနဲ့ ရနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေး
ရနျကုနျမွို့ တိုးဂိတျကနေ တဈနာရီမောငျးရုံနဲ့ မွို့ပွ ရဲ့ မှနျးကပျြမှုတှကေငျးဝေးမယျ့ မွေ၅ဧက အကယျြcoozy ခွံလေးကိုပွနျရောငျး ပါရစေ။ ‌မွေ၅ဧက အကယျြ ရှိပါတယျ ခွံတဈခွံလုံးကို လြှိုမွောငျး တှေ ပတျထားပီး အဝိစိရတှေငျးပါပွီး။ ‌ခွံတဈခွံ လုံးကို ကောငျးမှနျစှာ လညျပတျနိုငျမယျ့ မီးစကျတဈလုံးပါပါတယျ။ ပဲခူး ဇောငျးတူ လမျးမကွီးဘေး တငျပါ မကွာခငျ အစိုးရမီး ရရနျသခြောပါပွီ။ လမျးမီးတိုငျမြားခနြပေါတယျ။ ထိုငျးအုနျးခြိုမှေး အပငျ ၁၀၀ ပါပါတဲ့အတှကျ အဲ့ကဝငျငှေ ကလညျး အခြိနျ တနျသိမျးရုံပါဘဲ။ အုနျး သှငျး ဖို့ အသိမရှိရငျ တဈခါထညျးခြိတျဆကျပေးပါ့မယျ။ ကီလိုမာလကာ အပငျ၅၀လညျးစိုကျပေးထားပါတယျ ၆လသံပုရာ အပငျ၅၀ သရကျ သီဟို ငှကျပြော နှငျးသီး ကြှဲကောနှငျ့ အခွား စားပငျသီးပငျအစုံပါပြီး အိမျမှေးကွကျ ဘဲနှငျ့ အခွား အိမျမှေး တိရိစ်ဆာနျမြား ဒီလောကျအေးခမျြးပွီး ရနျကုနျ နဲ့ မဝေ တဲ့နရောလေးကို ပိုငျဆိုငျ သငျ့သူတှကေတော့ adventure zoo လုပျခငျြသူတှေ၊ ကလေးတှအေတှကျ အနားယူ အပနျဖွတေဲ့နရောလုပျခငျြသူတှေ မိသားစု အပိုငျ ဘိုးဘှားရိပျသာလုပျခငျြသူတှေ ၊treeking လုပျခငျြသူတှေ အရမျးကိုသငျ့တျောပါတယျရှငျ။ မွနေရောအနအေထားအရ တောငျကုနျးလေးပျေါမှာရှိပွီး tree house ပါတဲ့ အိမျလေးတဈလုံးပါဆောကျထားပွီးသားမို့ adventure and treeking လုပျခငျြသူတှအေတှကျ private Resort လေးအဖွဈ ဆကျလကျလုပျကိုငျနိုငျမဲ့ ဝငျငှအေတျောကောငျးမယျ့ နရောလေးဖွဈပါတယျ။ အိုအစေဈ (၁) ကို မရလိုကျလို့ အိုအစေဈ (၂) လေးဖနျတီးပေးပါလို့ တောငျဆိုမှု့တှကွေောငျ့ အဝတျတထညျကိုယျတခုနဲ့အိမျပျေါကိုအသကျ့တကျနရေုံ အဆငျ့သငျ့ပွငျဆငျပွီး.... ကပျြသိနျး၇၀၀ ပှဲစားလကျမခံပါဘူး။ တညျနရောအညှနျး ၃၉မိုငျ ရှပေုလငျ အရှလေ့မျး တညျတညျ့မောငျးပွီး ညာခြိုးပီးလြှငျ ဘောနပျကွီးရှာဝငျလမျးတညျ့တညျ့ ၂၃ မိုငျ/၃ ဖာလုံ ဆကျမောငျပီး ဇီးတောရှာ အဆုံး ညာဘကျတှငျ သဈတျောအိမျအဖွူလေးရှိသောခွံ (ကတ်တရာလမျးမ အဆုံး) 09401540698 Myanmar Builders Guide နယ်မြို့လေးမှာ လေကောင်းလေသန့်ရှုရှိုက်ရင်း ဘဝကို အေးဆေးစွာဖြတ်သန်းချင်သူများအတွက် အလွန်သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ရန်ကုန်မြို့ တိုးဂိတ်ကနေ တစ်နာရီမောင်းရုံနဲ့ မြို့ပြ ရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကင်းဝေးမယ့် မြေ၅ဧက အကျယ်coozy ခြံလေးကိုပြန်ရောင်း ပါရစေ။ ‌မြေ၅ဧက အကျယ် ရှိပါတယ် ခြံတစ်ခြံလုံးကို လျှိုမြောင်း တွေ ပတ်ထားပီး အဝိစိရေတွင်းပါပြီး။ ‌ခြံတစ်ခြံ လုံးကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်မယ့် မီးစက်တစ်လုံးပါပါတယ်။ ပဲခူး ဇောင်းတူ လမ်းမကြီးဘေး တင်ပါ မကြာခင် အစိုးရမီး ရရန်သေချာပါပြီ။ လမ်းမီးတိုင်များချနေပါတယ်။ ထိုင်းအုန်းချိုမွေး အပင် ၁၀၀ ပါပါတဲ့အတွက် အဲ့ကဝင်ငွေ ကလည်း အချိန် တန်သိမ်းရုံပါဘဲ။ အုန်း သွင်း ဖို့ အသိမရှိရင် တစ်ခါထည်းချိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ကီလိုမာလကာ အပင်၅၀လည်းစိုက်ပေးထားပါတယ် ၆လသံပုရာ အပင်၅၀ သရက် သီဟို ငှက်ပျော နှင်းသီး ကျွဲကောနှင့် အခြား စားပင်သီးပင်အစုံပါပီး အိမ်မွေးကြက် ဘဲနှင့် အခြား အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်များ ဒီလောက်အေးချမ်းပြီး ရန်ကုန် နဲ့ မဝေ တဲ့နေရာလေးကို ပိုင်ဆိုင် သင့်သူတွေကတော့ adventure zoo လုပ်ချင်သူတွေ၊ ကလေးတွေအတွက် အနားယူ အပန်ဖြေတဲ့နေရာလုပ်ချင်သူတွေ မိသားစု အပိုင် ဘိုးဘွားရိပ်သာလုပ်ချင်သူတွေ ၊treeking လုပ်ချင်သူတွေ အရမ်းကိုသင့်တော်ပါတယ်။ မြေနေရာအနေအထားအရ တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိပြီး tree house ပါတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးပါဆောက်ထားပြီးသားမို့ adventure and treeking လုပ်ချင်သူတွေအတွက် private Resort လေးအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့ ဝင်ငွေအတော်ကောင်းမယ့် နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အိုအေစစ် (၁) ကို မရလိုက်လို့ အိုအေစစ် (၂) လေးဖန်တီးပေးပါလို့ တောင်ဆိုမှု့တွေကြောင့် အဝတ်တထည်ကိုယ်တခုနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုအသက့်တက်နေရုံ အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ပြီး.... ကျပ်သိန်း၇၀၀ ပွဲစားလက်မခံပါဘူး။ တည်နေရာအညွှန်း ၃၉မိုင် ရွှေပုလင် အရှေ့လမ်း တည်တည့်မောင်းပြီး ညာချိုးပီးလျှင် ဘောနပ်ကြီးရွာဝင်လမ်းတည့်တည့် ၂၃ မိုင်/၃ ဖာလုံ ဆက်မောင်ပီး ဇီးတောရွာ အဆုံး ညာဘက်တွင် သစ်တော်အိမ်အဖြူလေးရှိသောခြံ (ကတ္တရာလမ်းမ အဆုံး) 09401540698
Tuesday, 14 January 2020 15:18
ဆိုငျခနျးပေါငျးက ၄၀၀ ကြျောပါဝငျမညျ့ မငျးဓမ်မလမျး Night Market ရှိ ဆိုငျခနျးမြား ငှားရမျးမညျ
မငျးဓမ်မရဲ့ ဒုတိယ ဗဟိုစီးပှားရေးဇုနျနရောဖွဈသော မငျးဓမ်မလမျးနဲ့ ကြိုကျဝှမျးဘုရားလမျးထောငျ့တှငျ ပွုလုပျမညျ့ Night Marketတှငျ ဆိုငျခနျးမြားကို ကွိုတငျ၍ ငှားရမျးနိုငျပါတယျ။ ဆိုငျခနျးနရော Rental Information တှေ သိရသလောကျဆိုရငျ နရောနဲ့ Zone တှေ ပျေါမူတညျပွီး တဈလစာ ငှားရမျးခမှာ (၂) သိနျးကပျြမှစ၍ (၇သိနျးခှဲ) ဝနျးကငျြထိ ရှိပါတယျ။ စာခြုပျခြုပျဆိုရာတှငျ အနညျးဆုံး ၃လ စာခြုပျခြုပျရမညျဖွဈပွီး စဖှငျ့မညျ့ရကျမှ ၁၅ ရကျကိုတော့ ငှားရမျးခ အခမဲ့ ရရှိမညျ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ ဆိုငျခနျးတှကေို ဇနျနဝါရီလ 15 ရကျနေ့ မတိုငျခငျ စာခြုပျခြုပျမယျဆိုပါက ငှားရမျးခကို (၅) သောငျးကပျြ လြှော့ပေးမယျဟုလညျး သိရပါတယျ။ ထိုဈေးကိုဖှငျ့လှဈလိုကျတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ Tourist Attraction ဖွဈဖို့နဲ့ မွို့ပွ လူနမှေုအဆငျ့အတနျး တိုးတကျလာစဖေို့ ရညျရှယျပါတယျ။ လကျရှိ ပါဝငျလာနိုငျမညျ့ ဆိုငျခနျးတှကေတော့ နိုငျငံတကာက နာမညျကွီး စားသောကျဆိုငျမြား၊ ပွညျတှငျးထုတျကုနျ ရိုးရာလကျမှု ပစ်စညျးဆိုငျမြား၊ အဝတျအထညျနှငျ့ လူသုံးကုနျတို့ကို တဈနရောထဲမှာ စုံလငျနအေောငျ စုစညျးထားရှိမညျ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ အခွားပါဝငျမညျ့ စိတျဝငျစားဖှယျအရာတှတေော့ -ပှဲကှငျး အလယျ မှာ လူငယျတှေ အကွိုကျတှမေ့ယျ့ Merry - Go - Round ပုံစံ တူ Bar !!! -ပေ ၇၀၀ ကြျောရှညျတဲ့ မွနျမာ့ ရိုးရာ ဝါးလြှောကျလမျး Stage စငျတှေ Neon Lighting တှေ ကစားကှငျးတှေ နဲ့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Night Life ကို ဖနျတီးပေးထားမယျဟု သိရပါသညျ။ Myanmar Builders Guide ---Zawgyi--- ဆိုင်ခန်းပေါင်းက ၄၀၀ ​ကျော်ပါဝင်မည့် မင်းဓမ္မလမ်း​ Night Market ရှိ ဆိုင်ခန်းများ ငှားရမ်းမည် မင်းဓမ္မရဲ့ ဒုတိယ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်နေရာဖြစ်သော မင်းဓမ္မလမ်းနဲ့ ကျိုက်ဝှမ်းဘုရားလမ်းထောင့်တွင် ပြုလုပ်မည့် Night Marketတွင် ဆိုင်ခန်းများကို ကြိုတင်၍ ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ခန်း​နေရာ Rental Information ​တွေ သိရသ​လောက်ဆိုရင် နေရာနဲ့ Zone တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်လစာ ငှားရမ်းခမှာ (၂) သိန်းကျပ်မှစ၍ (၇သိန်းခွဲ) ဝန်းကျင်ထိ ရှိပါတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အနည်းဆုံး ၃လ စာချုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စဖွင့်မည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်ကို​တော့ ငှားရမ်းခ အခမဲ့ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းတွေကို ဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့ မတိုင်ခင် စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပါက ငှားရမ်းခကို (၅) သောင်းကျပ် လျှော့ပေးမယ်ဟုလည်း သိရပါတယ်။ ထိုဈေးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Tourist Attraction ဖြစ်ဖို့နဲ့ မြို့ပြ လူ​နေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပါဝင်လာနိုင်မည့် ဆိုင်ခန်းတွေကတော့ နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး စား​သောက်ဆိုင်များ၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် ရိုးရာလက်မှု ပစ္စည်းဆိုင်​များ၊ အဝတ်အထည်နှင့် လူသုံးကုန်တို့ကို တစ်​နေရာထဲမှာ စုံလင်​နေ​အောင် စုစည်းထားရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အခြားပါဝင်မည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာတွေတော့ -ပွဲကွင်း အလယ် မှာ လူငယ်​တွေ အကြိုက်​တွေ့မယ့် Merry - Go - Round ပုံစံ တူ Bar !!! -ပေ ၇၀၀ ​ကျော်​ရှည်တဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဝါး​လျှောက်လမ်း Stage စင်​တွေ Neon Lighting ​တွေ ကစားကွင်း​တွေ နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Night Life ကို ဖန်တီး​ပေးထားမယ်ဟု သိရပါသည်။ Crd: Food in Yangon
Saturday, 11 January 2020 09:47
ထားဝယျအထူးစီးပှားရေးဇုနျ ကနဦးအဆငျ့စီမံကိနျးအတှကျ အကောငျအထညျဖျောရေး စာခြုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွငျဆငျပွီးစီး
ထားဝယျအထူးစီးပှားရေးဇုနျ ကနဦးစကျမှုဇုနျနယျမွစေီမံကိနျး အကောငျအထညျဖျောရေးအတှကျ စာခြုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွငျဆငျပွီးစီးကွောငျး ထားဝယျအထူးစီးပှားရေးဇုနျ စီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီမှ သတငျးထုတျပွနျထားပါသညျ။
Monday, 04 November 2019 15:29
Shopping Mall မြားတညျဆောကျရနျ တရုတျနိုငျငံကလာရောကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမညျ
တရုတျနိုငျငံမှအဖှဲ့တဈခုက Shopping Mall မြားတညျဆောကျရနျအမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၂၅၀ ခနျ့ရငျးနှီးမွှုပျနှံမညျ ဖွဈကွောငျးကုနျသညျစကျမှုအသငျးခြုပျဥက်ကဌဦးဇျောမငျးဝငျးကပွောကွားသညျ။
Saturday, 05 October 2019 09:46
ရနျကုနျမွို့တှငျ Serviced Apartment အခနျး ၂၂၅၀ ဝနျးကငျြရှိပွီး ယခငျသုံးလပတျထကျ ငှားရမျးခ နှဈရာခိုငျနှုနျးကဆြငျး
ရနျကုနျမွို့တှငျ Serviced Apartment (အဆငျ့မွငျ့ဝနျဆောငျမှုပါသောတိုကျခနျး) အခနျး ၂၂၅၀ ဝနျးကငျြရှိလာပွီး ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျအတှငျး အခနျးသဈထှကျရှိမှုမရှိခဲ့သျောလညျးအခနျးငှားရမျးခမြား ကဆြငျးခဲ့ကွောငျးကနဒေါအခွစေိုကျ အိမျခွံမွဈေေးကှကျ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးတဈခုဖွဈသော Collier International (Myanmar) က ထုတျပွနျသညျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျ ဈေးကှကျအစီရငျခံစာအရသိရသညျ။
Friday, 06 September 2019 14:47
စစ်ကိုင်းမြို့၌ ခရီးသွားဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စင်တာဖွင့်မည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး တိုင်း ဒေသကြီး ၏ ၀င်ပေါက်စစ်ကိုင်း မြို့တွင် သတင်းအချက်အလက် စင်တာ ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းနိုင် ကပြောသည်။
Wednesday, 28 August 2019 15:44
ရွှေမင်းဝံ နှစ်ထပ်ဈေးသစ်ကြီး စစ်ကိုင်းမြို့၌ဖွင့်လှစ်
ဩဂုတ် ၂၅ ရက်က စစ်ကိုင်းမြို့ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်တွင် ရွှေမင်းဝံ အဆင့်မြင့်နှစ်ထပ်ဈေးသစ်ကြီးကို တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့်နယ် စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး၊
Wednesday, 07 August 2019 16:21
ညလုံးပေါက်ရောင်းချနိုင်ရန် ကန်ထရိုက်ပေးမည့် YCDC ပိုင်ဈေးများ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (YCDC) ပိုင်ဈေးများကို ညလုံးပေါက်နှင့် ည ၈ နာရီခန့်အထိ ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် ဈေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက်စနစ်ပေးရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားသည်။
Myanmar CBM Services Co., Ltd.